Qorshe dhismeed laga fulineyo magaalada Istockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Fredrik Sandberg /Sveriges Radio
Qorshe dhismeed laga fulineyo magaalada Istockholm
La daabacay måndag 11 november 2013 kl 10.45
Magaalada Istockholm ayaa la soo ban-dhigey qorshe-dhismeedyo lagu talo jiro in laga hir-geliyo, kuwaasina oo ey ku kici doonaan miisaaniyad gaarsii-san labaatameeyo bilyan oo koronka iswiidhishka ah. Dhismooyinkaa ayey ka mid yihiin 78 000 oo guryaha la dego iyo dhismaha sagaal maxaddo ee tareemmada dhulka hoostiisa mara (Tunnelbana).
Qorshahan ayey ka mideey-san yihiin dawladda, hayad-goboleedka (landstinget) iyo maamullada afarta degmo ee Istockholm, Nacka, Solna iyo Järfälla, iyadoona maanta la soo ban-dhigi doono sharaxaadda qorshahaasi, sida ey maanta ku qoreen hogaamiyeyaasha xisbiyada haya awoodda dalka war-geeyska maalinlaha ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno DN, boggiisa Debatt.
Guud ahaan qorshe-dhismeedkan ayaa la fileyaa inay ku kici doonto miisaaniyad gaarsii-san 25,7 bilyan oo koron. Iyadoona qaarkeed lagu miisaaniyad gelin doono kor u qaadidda qidmadda gawaarida ee faras-magaalaha (trängselskatt).